Madaxweyne Xigeenka Somaliland Oo Soo Bandhigay Qaar Kamida Khilaafka U Dhexeeya Isaga Iyo Madaxweynaha Halka Uu Salka Ku Hayo | Cadceed newssite
Madaxweyne Xigeenka Somaliland Oo Soo Bandhigay Qaar Kamida Khilaafka U Dhexeeya Isaga Iyo Madaxweynaha Halka Uu Salka Ku Hayo
Feb 12, 2013 Hargeysa(Cadceed) – Waxaa soo noqnoqday khilaafaad badan iyo xag-gasho siyaasadeed oo ka dhaca dalka Somaliland, warar badan ayaa inta badan been noqda, waxaa kaloo halkooda ku shiiqa khilaafaad badan iyada oo aanu galaafan kuwa iskaga horyimi siyaasada. Khilaafaadyada qaarkoodna wuxuu si gaar ah u saameeyaa ama galaaftaa siyaasiyiin gaar ah. Khilaafka maanta ka dhexeeya labada masuul ee dalka ugu sareeyaa, wuxuu keenayaa in dalka Somaliland uu halis galo.
Warar aanu ka helnay illo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in uu madaxweyne ku xigeenku la yeeshay masuuliyiin golayaasha qaranka ah iyo haldoor kale oo reer Somaliland ah, si qoto dheerna ugu waramay isaga oo dhaliilaya hoggaanka Madaxweyne Siilaanyo, wuxuu kaloo kulamo la yeeshay taliyayaasha ciidamada qaran ee dalka. Dhamaan kulamadaas wuxuu ku sheegay sida warar xog ogaal ah oo illo ku dhaw dhaw madaxweyne ku xigeenku sheegayaan in isaga iyo madaxweyne Axmed Siilaanyo oo dalka safar kaga maqan, midna aanu gacanta waxba ugu jirin ee ay jiraan masuuliyiin kale oo dalka maamula. Isaga oo ku dhaliilaya in ay xubnahaasi taladii dalka si dadban ugala wareegeen madaxweynaha, isaguna aanu eegan karin. Waxa ay wararku intaas ku darayaan in uu amniga qaranka iyo nidaamka dawladnimo ka dayriyey. Madaxweyne ku xigeenka ayaa wararku sheegayaan aanu ka helayno illaha lagu kalsoon yahay, in uu dhaliilayo oo eedo iyo afduub maamul ku haysto wasiiro iyo masuuliyiin uu leeyahay dalka khalkhal ay ku hayaan, dhibta ay wadaana uma adkaysan karo madaxweynaha iyo isagauna waxa dhacaya waxba kalama socdaan. Eedahaas oo argagax ku keenay dadkii dhegeysanayey oo la yaabay weerarka halkaas gaadhay ee uu keenay kulankaas madaxweyne ku xigeenku.
Warar aanu ka helayno illo ku dhaw dhaw kulamadaas ayaa sheegaya in dadkii iyo masuuliyiintii uu la shiray ay ku guubaabiyeen madaxweyne ku xigeenka in uu hab distuuriya u soo gudbiyo cabashada, sidoo kale aanu balaadhin khilaafka ee sugo inta madaxweynuhu soo noqonoyo oo aanu dalka khalkhal gelin. Wuxuu kaloo sameeyey madaxweyne ku xigeenku dhamaan dadkii kaadhadhka haystay madaxtooyada lagu galo ee aan shaqada ka hayn madaxtooyada ayuu diiday in ay soo galaan isaga oo ku sababeeyey arrimo la xidhiidha amniga. Arrinkaas oo bulshada caalamka u diraya dareenka argagax leh sidoo kale xoojinaya dhawaaqii nabadgelyo daro ee ay sheegayeen dawladaha Maraykanka iyo Ingiriisku. Dhinaca kale, illo xogagaal ah oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay, in ay jiraan wasiiro ku hawlan sidii loolan adag loogala hor iman lahaa madaxweyne ku xigeenka, waxaana shalay shirar ay qabsadeen, oo ka koobnaa xildhibaano iyo masuuliyiin kale la isla eegay, qaabka loo maarayn karo inqilaab ay sheegeen in uu ku samaynayo madaxweyne ku xigeenku madaxweynaha. Kulankaas oo sida wararku sheegayaan uu hormood ka ahaayeen Wasiir Xirsi, Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Wasiir Xuseen Guray ayaa la sheegayaa in xildhibaadanadii iyo masuuliyiintii ay la kulmeen ku guubaabiyeen wasiirada in aanay sii balaadhin khilaafka ee cagta u dhigaan, sidoo kale distuurka u dhaxeeya labada masuul ee qaranka u sareeyaa kala saari doono. Sidaas awgeedna, hay’adaha khuseeya ayaa eegi doona khilaafkooda haddii loo baahdo. waxaa wararku intaas ku darayaan in ay jiraan wasiiro kula dhex jira beesha madaxweynaha gubaabo iyo kicin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka kuwaas oo ah kuwa uu sida gaarka ah u weeraray Madaxweyne ku xigeenka Somaliland.
Khilaafka labada masuul ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa u dhaxeeya ee ay shidayaan wasiirada kala raacsan iyo xildhibaanada qaarkood ayaa u eg in uu dalka dhaawac ku keeni karo haddii aan loo dedaalin xalintiisa.